Musharraxiinta Madaxweynaha Puntland oo siyaasaddooda maanta la wadaagay Baarlamaanka – Kalfadhi
21-ka Musharrax, ee shalay isu diiwaangelisay Xilka Madaxweynanimada Puntland, ayaa maanta mid mid u hortagay Golaha Wakiillada Puntland. Waxay ka horjeediyeen qorshahooda siyaasadeed ee ay doonayaan iney deegaanka ku hogaamiyaan. Qudbadahoodu aad bey isugu dhawaayeen, waxaana uu Musharax waliba ku doodayey inuu wax ka qaban doono arrimaha ammaanka, qabaa’ilka, xiriirka Puntland iyo Dowladda Federaalka, dhaqaalaha, doorashooyinka qof iyo codka ah iwm.
Musharax Cabdi Faarax Saciid (Juxa), oo ahaa Wasiirkii Arrimaha Gudaha, ayaa yiri “waxaan ahay Wasiirkiinii Waxbrashada ee nidaamiyey manaahijta waxbrashada, imtixaanka iyo shahaadooyinka”. “Haddii aad i doorataan, waxaan ka shaqeyn doonaa “Kaabayaasha dhaqaalaha, adkeynta Nidaamka Federaaka, jaangoynta ciidanka, adkeynta dakhliga iyo la dagaalanka musuqa” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Musharrax Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, oo hadda jooga xafiiska Madaxweynaha, ayaa sheegay in baahida Puntland ay aad u fara badan tahay, awooddeeda dhaqaalana ay aad u yar tahay. Intii uu xafiiska joogay ayuu sheegay inuu ku dadaalayey daboolista baahidaas uu sheegay inuu qabtay Puntland. “Puntland waa Dowlad Goboleed ay xadidan tahay awoodeeda dhaqaale, ayna balaaran tahay baahideeda, deenna ma qaadan karto, waxaana ku tiirsanahay xoolaha. Sidaadaraadeed, waxaan diiradda saarnay kor u qaadiida kaabayaasha dhaqaalaha” ayuu yiri Musharrax Cabdiwali Gaas.
Musharraxiinta ayaa, in badan oo ka mid ah, waxay ku ololeynayeen iney hayaan qorshayaal ay kula dagaalami doonaan Al-Shabaab iyo Daacish, sida Cabdiqaadir Yaasiin Cabdulle oo yiri “arrimaha ammaanka, walaalayaal waxaad ogtihiin inaan baabuur baroon ah iyo ciidamo yaacaya lagu sugi karin. Waxaan balan qaadayaa inaan sameeyo ciidan sirdoon ah, oo ka hortaga meesha ay dhibaatadu ka imaaneyso”.
Musharrax Daahir Mire Jibriil ayaa isaguna sheegay inaan inta badan la fulin balan qaadyada faraha badan ee ay musharraxiintu sameynayaan marka ay guuleystaan kadib. Saasdaraadeed, waxa uu sheegtay in haddii isaga loo doorto Madaxweynaha Puntland uu dib ugu soo celin doono talada Golaha, marka uu fulin waayo yaboohiisa. Wuxuu yiri “maanta, Puntland uma baahna in hogaamiyayaasheeda lagu doorto balanqaadyo qurux badan”.